Parc Reniala Ambalamanga: Nomen'ny orinasa Star toeram-ponenana ny microcèbes
mardi, 05 décembre 2017 20:28
Microcèbes na Tsedy, ragidro kely indrindra manerantany tsy hita afa-tsy eto Madagasikara, mirefy 12 cm raha tsy refesina miaraka amin'ny rambony ary milanja manodidina ny 90 grama farafahabetsany. Tsy mivoaka izy raha tsy amin'ny alina ary miafina anaty hazo poakaty toy ny bararata lehibe rehefa atoandro.
Anisan'ny ompiana ao amin'ny valan-javaboahary Reniala ity biby ity mba ho fiarovana azy noho izy efa atahorana ho lany tamingana noho ny doro tanety sy ny fanondranana an-tsokosoko.
Tsy nifanaraka tamin'ny fomba fiainan'ireto biby nompiana tao ireto anefa ny toerana nonenany ka voatery nanao antso avo ny mpitantana ny valanjavaboahary ahafahana manangana toerana mifanaraka amin'izany.
Namaly ny antso ny orinasa Star ka nanolotra lelavola 13 tapitrisa Ariary nananganana izany ho an'ireo tsedy 4 izay efa ompiana ao an-toerana sy ho an'ireo sifaka.
15 minitra miala ny tanànan'i Mahajanga ny Parc Reniala, eny Ambalamanga ato anatin'ny faritra Boeny. Velarantany mirefy 5Ha no misy ny valanjavaboahary ahitana ireo biby sy zava-maniry tsy hita raha tsy eto Madagasikara ary mampiavaka ny faritra Boeny.
Tamin'ny taon-dasa dia mpianatra hatrany amin'ny 5661 sy mpanabe 543 ary mpizahatany vahiny 202 no nitsidika ity toerana ity, nankafy ireo karazana ragidro toy ny sifaka, sy ny maro hafa. Ny ankoay, ny reniala (baobab) sy ny voamboana ary ny ala honko.
mardi, 12 décembre 2017 15:25
mardi, 12 décembre 2017 04:41
lundi, 11 décembre 2017 23:03
lundi, 11 décembre 2017 05:48
dimanche, 10 décembre 2017 19:12
dimanche, 10 décembre 2017 19:08
dimanche, 10 décembre 2017 13:40
samedi, 09 décembre 2017 07:01